အာပြဲခြောက်ကြော်ချက် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ငါးဖောင်ရိုးခြောက်( သို.) အာပြဲခြောက်ကြော်ချက်
ငါးဖောင်ရိုးခြောက်(သို.) အာပြဲခြောက်........၁၅ ကောင်ခန်.
ကြက်သွန်ဖြူ .......................................၃ တက်(......။....)
ငါးဖောင်ရိုးခြောက်(သို.) အာပြဲခြောက်အကောင်ကြီးကြီးတွေကို ၁ လက်မအရွယ်လောက်ပိုင်းဖြတ်ပြီးခေတ္တရေအေးစိမ်ထားပါ။
ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ကြက်သွန်ဖြူ တွေကို နုပ်နိူင်သလောက်ခပ်နုပ်နုပ်စဉ်းပါ။
ဆီအနည်းငယ်မှာ ငါးခြောက်တွေကို အနည်းငယ်ပွရုံလေးသာကြော်ပေးပါ။
လက်ကျန်ဆီမှာ ကြက်သွန်ဖြူ ကို နနွင်းလေးပါသည်ဆိုရုံနဲ.ဆီသတ်ပါ။
အောင်ချက်ပါ။ ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန်.တို.နှင့်အရသာသွင်းပါ။
နောက်ဆုံး ကြော်ထားတဲ့ငါးခြောက်တွေထည့် ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းမထူမပါးလေးလှီးထည့်ကာ နံနံပင်ပါးပါးလှီးလေးတွေဖြူးကာသုံးဆောင်နိူင်ပါပြီ...။